Eey fashiliyey howlgal milateri oo Mareykanku ka fuliyey Yemen - iftineducation.com
Eey fashiliyey howlgal milateri oo Mareykanku ka fuliyey Yemen
iftineducation.com – Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa axadda maanta ah sheegay in Wax-waxda Eey ay wateen ciidamada Mareykanka uu fashiliyey howlgal milateri oo ciidamada dalkaas ka fuliyeen dalka Yemen, gaar ahaan dhulka uu maamulo ururuka Alqaacidda.
Howlgalkaas oo dhacay saqdii dhexe ee habeenkii sabti soo geleysay ayaa looga gol lahaa in lagu soo badbaadiyo labo laheyste oo u kala dhashay Mareykanka iyo Koonfur Afrika, kuwaasoo sanad ka hor laga afduubay caasimadda Yemen ee Sanca.
Ciidamada Mareykanka ayaa markii ay ku dhawaadeen goobta lagu hayey labadaas nin waxaa qeyliyey eey ay wateen, taasoo keentay in ragii Alqaacidda ay baraarugaan, islamarkaana rasaas oodda kaga qaadan ciidamada Mareykanka.
Alqaacidda ayaa markii weerarku ku bilwoday toogatay labada la heyste, waxeyna isaga baxeen goobta oo ay markii dambe la wareegeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka oo lagu sheegay ilaa 40 askari.
Ciidamada Mareykanka ayaa waxaa halkaas u dhaweeyey diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah, islamarkaana dagaallanta, waxeyna markii dambe ku socdeen lug, hase ahaatee qeylada eeyda la socotay ayaa fariin u diray Alqaacidda.
Sarkaalka Mareykanka ayaa sheegay in ciidamadooda oo 100 mitir kaliya u jira dhismaha lagu hayey labada la-heyste uu qeyliyey mid ka mid ah eeyihi la socday, taasoo keentay in dagaalyahanada Alqaacidda rasaas soo bilaabaan.
Labada laheyste oo la kala oran jiray Luke Somers oo wariye Mareykan ahaa iyo Pierre Korki oo reer Koonfur Afrika ahaa ayaa Mareykanku rumeysan yahay in la toogtay kadib markii rasaastu bilaabatay.
Labadan qof oo dhaawac ah ayaa ciidamada Mareykanku ka heleen goobtii lagu hayey, hase ahaatee mid ka mid ah ayaa dhintay markii diyaaradda la saaray, halka kan labaadna uu dhintay markii diyaaraddu gaartay markabkii ay kasoo duushay oo badda taagnaa.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii amray in xoog lagu soo furto labadaas qof ee mudada sanadka ah Alqaacidda ku heysatay dalka Yemen.
Arbacadii lasoo dhaafay ayaa hogaamiye ka tirsan Alqaacidada Jazeeradda Carabta oo lagu magacaabo Nasar Cali Al-anasi uu ku hanjabay iney 3 maalmood kadib ay toogan doonaan laheystaha Mareykanka ah ee magaciisu ahaa, Luke Somers haddii aan Mareykanku aqbalin dalabkooda, kaasoo uu ku sheegay mid Washington garaneyso.